Ururka SOLJA oo cambaareeyay Suxufiyad tacadi loo gaystay
Home WARARKA Ururka SOLJA oo cambaareeyay Suxufiyad tacadi loo gaystay
Hargeysa(Berberanews)-Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA, ayaa canbaareeyay fal tacadi ah oo Askari ka tirsan Ciidanka Nabadgelyada Waddooyinka ee Taraafiga dhaawacyo ku gaadhsiiyay Weriye Niciima Cabdiraxmaan oo ka mid ah hablaha warbaahinta Somaliland ee ka hawlgala Telefishanada maxaliga ah.
Sida ay sheegeen Ururka Suxuyiinta ee SOLJA, Askariga ayaa soo gaadhsiiyay Niciima Cabdiraxmaan dhaawacyo labada gamcood kasoo gaadhay, xilli ay Isniintii 11 Oct, 2021, muuqaal ka duubaysay shil gaadhi oo ka dhacay meel aan ka fogayn Saldhiga Koodbuur ee Magaaladda Hargeysa.
Guddoomiyaha Guddida Difaaca ee SOLJA, Cabdifataax Ismaaciil Mursal, ayaa ka hadlay arrintaa, wuxuuna ku tilmaamay in ay nasiibdaro tahay in Askarigaasi dhaawacyada ka muuqda Niciima, soo gaadhsiiyo, iyadoo gudanaysa waajibkeeda shaqo ee saxaafadeed.
Muqaalkan ka Daawo SOLJA Oo Canbaaraysay Arrintaa.
Previous articleBritain oo Lacag badan ku maalgelinaysa dekedda Berbera
Next articleSomaliland: Wasaraadda Gudaha oo mamnuucday Fadhiyada Xilka lagaga qaadi karo Maayarrada
Dhacdo ka yaabisay reer Hargeysa iyo Tuugtii Fulisay oo la Qabtay
“Waxaan go’aansaday inaanan ka qaybgelin tartanka Gudd. Waddani” Jirde
Maamulka Khaatumo oo ku dhawaaqay inay ka baxeen heshiiskii Somaliland
Ahlu-sunnah oo waan waan kaga baxay Guriceel
“Kuwa qalalaasaha wada waa kuwii aan ka guulaysanay” Maar-xigeenka Berbera